संसारका १० धनी व्यक्तिहरू | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← बिचरा पत्नीपीडितहरु !	नयाँ बर्षको आगमान सँगै बिदेशमा पनी रमाए नेपालीहरु →	संसारका १० धनी व्यक्तिहरू	02
अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने फोब्र्स पत्रिकाले प्रत्येक वर्ष विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूची प्रकाशित गर्छ। वर्ष २०१०मा संसारमा आफ्नो सम्पत्तिमा वृद्धि गरेर थुप्रै मानिस अर्बपतिको सूचीमा सामेल भएका छन् भने केही व्यक्ति यो सूचीबाट बाहिरिएका पनि छन्। सूचीको पहिलो १० स्थानमा रहेका केही अर्बपति लगातार यो सूचीमा रहँदै आएका छन्। यो वर्ष सूचीमा २ जनाले प्रवेश पाएका छन् भने २ जनाले आफ्नो पूर्वस्थान गुमाएका छन्। सूचीबाट आफ्नो नाम गुमाउनेमा स्वीडेनका इङभार काम्प्राड तथा जर्मनीका थिओ अल्ब्रेच्ट छन्। उनीहरू अघि वर्ष क्रमशः पाँचौं र नवौं स्थानमा थिए।
कार्लोस सिलम हेलु
मेक्सिकोका नागरिक ७० वर्षीय कार्लोस सिलम हेलु वर्ष २०१० मा संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन् । अघिल्लो वर्ष उनी तेस्रो नम्बरमा थिए । हेलु मुख्यतः दूरसञ्चारका व्यवसायी हुन् । उनको यो व्यापारले मेक्सिकोमा एकाधिकार नै जमाएको छ । त्यसबाहेक सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा समेत उनको प्रभाव छ । उनी खुद्रा व्यापार, बैंकिङ तथा बिमासम्बन्धी कारोबार पनि गर्छन् । उनको कुल सम्पत्ति ५३ अर्ब ५० करोड डलर बराबर छ । उनका ६ सन्तान छन् । तीमध्ये ३ छोरा उनको कारोबारमा सहयोगीका रूपमा कार्यरत छन् ।
५४ वर्षीय बिल गेट्स अमेरिकी नागरिक हुन् । उनको सम्पत्ति अहिले ५३ अर्ब डलर छ । अघिल्लो वर्ष यो सूचीको पहिलो स्थानमा रहेका बिल गेट्सले आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा बिल गेट्स तथा मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसनलाई दान गरेकाले यो वर्ष उनी दोस्रो स्थानमा झरेका हुन् । बिल गेट्सले सन् २०१० मा आफ्नो सम्पत्तिमा १३ अर्ब डलर थपेका छन्, तैपनि आम्दानीको ठूलो हिस्सा विभिन्न सामाजिक कार्यमा लगानी गरेर उनले पर्याप्त चर्चा पाएका छन् । उनी तीन सन्तानका पिता हुन् । उनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दागर्दै सफ्टवेयरको व्यापारमा लागेर पढाइ छाडेका थिए । सफ्टवेयरको सानो व्यापारबाट प्रारम्भ भएको उनको व्यवसाय अहिले विश्वव्यापी भएको छ । उनको माइक्रोसफ्ट कम्पनीबाट उत्पादित अपरेटिङ सिस्टमद्वारा अहिले विश्वका ९४ प्रतिशत कम्प्युटर सञ्चालित छन् ।
७९ वर्षीय वारेन बफेट पनि अमेरिकी नागरिक हुन् । उनलाई संसारका धनीको सूचीमा तेस्रो स्थानमा राखिएको छ । उनको कुल सम्पत्ति ४७ अर्ब डलर छ । दुई वर्ष बफेट संसारकै पहिलो धनी थिए । यो वर्ष उनले आफ्नो सम्पत्तिमा ९ अर्ब डलर थपेका छन् । बफेटले पनि आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा बिल गेट्स तथा मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसनलाई दान गरेका छन् । उनले युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्काबाट आर्टस् र साइन्समा स्नातक तथा कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट साइन्समा स्नातक गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा चर्चित बफेटले सेयर, बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रमा लगानी गरेर यत्रो सम्पत्ति हासिल गरेका हुन् । उनको सेयर अमेरिकन एक्सप्रेस, कोकाकोला, जिलेटजस्ता प्रमुख कम्पनीहरूमा छ । बफेट बिमा कम्पनीको प्रमुखसमेत छन् ।
यसै वर्ष आफ्ना लागि संसारकै सबैभन्दा महँगो निजी आवास निर्माण गरेर चर्चामा आएका पेट्रोकेमिकल्सका भारतीय व्यापारी मुकेश अम्बानी फोब्र्स पत्रिकाको सूचीमा चौथो स्थानमा छन् । अघिल्लो वर्ष सातौं स्थानमा रहेका अम्बानीको सम्पत्ति २९ अर्ब डलर भन्दा बढी छ । अम्वानीले आफूलाई प्राप्त पैतृक सम्पत्तिलाई विस्तार गरेर यो स्थान प्राप्त गरेका हुन् । उनको स्वामित्वमा रहेको रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्सले सन् २००९को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा पनि उल्लेख्य व्यापार गरेको थियो । लक्ष्मी मित्तल
भारतको राजस्थानमा जन्मिएका ५९ वर्षीय लक्ष्मी मित्तल हाल लन्डनको किङस्टनमा बस्छन् । उनलाई फोब्र्सले वर्ष २०१० मा विश्वको पाँचौं धनीको सूचीमा राखेको छ । उनको कुल सम्पत्ति २८ अर्ब ७० करोड डलर छ । उनले सानो उमेर विपन्नतामा बिताउनुपरेको थियो । भारतको स्वतन्त्रताभन्दा अघि उनका बुबाले सम्पूर्ण परिवारलाई कलकत्ता लगे । त्यहाँ उनका बुबाले स्टिल कम्पनीको साझेदारका रूपमा काम गरे । लक्ष्मीले कलकत्ताकै सेन्ट जेभियर्स कलेजबाटसन् १९६९ मा कमर्समा स्नातक गरे । त्यसपछि उनी आफ्नो बुबासँगै स्टिलको व्यापार गर्न थाले । सन् १९९४ मा आफ्ना बुबा र दाजुसँग खटपट भएपछि उनले स्वतन्त्र रुपमा व्यापार सञ्चालन गर्न थाले । पछि उनले लन्डनमा आफ्नो कम्पनी स्थापित गरे । उनको मित्तल स्टिल कम्पनीले उत्पादन गरेका स्टिल रोमानिया, बोस्निया हर्जगोभिना, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका आदि देशमा प्रसिद्ध छन् ।
लरेन्स एलिसन अमेरिकी नागरिक हुन् । उनको कुल सम्पत्ति साढे २८ अर्ब डलर छ । फोब्र्स पत्रिकाको सूचीमा छैटौं स्थानमा रहेका एलिसन ओराकल सफ्टवेयरका मालिक हुन् । उनले सन् १९७७ मा ओराकलको क्षेत्रमा काम गर्न थालेका थिए । सन् १९८६ देखि यो सार्वजनिक प्रयोगमा आएको थियो । यसको सेयर मूल्य बढ्दै जाँदा उनी सन् २००९ देखि सर्वाधिक धनीको सूचीमा पहिलो दस स्थानभित्र पर्न सफल भएका हुन् । एलिसनले युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा भौतिकशास्त्र पढेका थिए, तर स्नातक नगर्दै बीचैमा पढाइ छाडेका थिए । उनको ४ सय ५३ फुट अग्लो राइजिङ सन् नामक पानीजहाज छ, जसलाई एलिसन आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छन् ।
फ्रान्सका सौन्दर्य प्रशाधनसँग सम्बन्धित एलभिएमएच नामक कम्पनीका मालिक बेर्नाड अर्नल्ट फोब्र्स पत्रिकाको अर्बपतिको सूचीमा पहिलोपल्ट पहिलो दस स्थानमा आएका छन् । अर्नल्टको सम्पत्ति २७ अर्ब ५० करोड डलर बराबर छ । फ्रान्स बाहिर चिनको सांघाईमा व्यावसायिक लगानी गर्ने अर्नल्टको प्रसिद्धि फेसनको संसारमा समेत छ । भनिन्छ, अर्नल्टको उत्पादनको प्रयोग विना संसारमा फेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम संभव हुन सक्दैन । उनका प्रसिद्ध उत्पादनहरूमा लुइस भिटन, मोट तथा क्यान्डोन ब्रान्डका सौन्दर्य सामग्री हुन् । आइक बाटिस्टा
खानी तथा तेल व्यापारी एवं ब्राजिलका पूर्वखानी मन्त्रीका छोरा आइक बाटिस्टा फोब्र्स पत्रिकाको अर्बपतिको सूचीमा पहिलो पटक पहिलो दस स्थानमा परेका हुन् । आगामी केही वर्षभित्र विश्वकै सर्वाधिक धनि व्यक्ति बन्ने दावी गरिरहेका आइक बाटिस्टाको कुल सम्पत्ति २७ अर्ब अमेरिकी डलर छ । सन् २०१० मा मात्रै बाटिस्टाले आफ्नो सम्पत्तिमा १९ अर्ब ५० करोड डलर थपेका थिए । अहिले उनी संसारकै सबैभन्दा ठूलो सुन खानीका समेत मालिक भएका छन् ।
गत वर्ष फोब्र्स पत्रिकाको अर्बपतिहरूको सूचीमा दसौं स्थानमा रहेका स्पेनका ७४ वर्षीय व्यापारी अमान्सियो ओर्टेगा यो वर्ष नवौं स्थानमा छन् । उनको कुल सम्पत्ति २५ अर्ब डलर बराबर छ । ओर्टेगा मुलत खुद्रा व्यापारी हुन् । स्पेनमा उनको जारा नामक स्टोर छ । यो स्टोरमा विभिन्न सामग्रीहरू पाइन्छन्, जसमा लत्ताकपडादेखि लिएर घरायसी उपभोगसम्मका सामग्रीहरू छन् । विश्वका ७१ देशमा यस्ता ४ हजारभन्दा बढी स्टोर छन् । यसबाहेक ओर्टेगाको ग्याँस, पर्यटन उद्योग, बैंकिङ तथा रियल स्टे टका क्षेत्रमा पनि विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा लगानी छ ।
गत वर्ष फोब्र्स पत्रिकाको अर्बपतिहरूको सूचीको छैटौं स्थानमा रहेका जर्मनीका ८६ वर्षीय कार्ल अल्ब्रेच्ट यो वर्ष केही सम्पत्ति थपेर पनि दसौं स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । उनको कुल सम्पत्ति साढे २३ अर्ब ५० करोड डलर बराबर छ । कार्ल अल्ब्रेच्ट पनि खुद्रा व्यापारी हुन् । जर्मनीलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा उनका सुपरमार्केटहरू छन् । अमेरिकाका २९ राज्यका १ हजारभन्दा बढी सुपर मार्केटका मालिक अल्ब्रेच्टले सन् २०१० मा मात्र अमेरिकामा ७५ वटा नयाँ सुपरमार्केट थपेका थिए । अर्बपतिहरूको सूचीमा पहिलो दस स्थानमा रहनेहरूमध्ये अल्ब्रेच्ट सबैभन्दा पाका हुन् ।
Posted by agnibana on जनवरी 2, 2011 in Uncategorized
← बिचरा पत्नीपीडितहरु !	नयाँ बर्षको आगमान सँगै बिदेशमा पनी रमाए नेपालीहरु →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...